बच्चा गुमाएकी आमाको प्रश्नपछि टिचिङकै डाक्टरको आत्मविश्लेषण: हो, हामी घमण्डी छौं :: डा. समिर लामा :: Setopati
बच्चा गुमाएकी आमाको प्रश्नपछि टिचिङकै डाक्टरको आत्मविश्लेषण: हो, हामी घमण्डी छौं
हो, मिठो बोल्ने डाक्टर मैले पनि कमै देखेको छु। तनावको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने, माग अनुसार जनशक्ति नभएकाले कामको लोड अत्याधिक भएकोले, काममा सन्तुष्टि नभएकोले हो कि धेरैजसो डक्टर, नर्सहरु बिरामीहरुसँग झर्केको नै देखिन्छन्। बिरामीहरु पनि रिसाइ पो हाल्छन् कि, केही भनी पो हाल्छन् कि भनेर डाक्टरहरुसँग सजिलै बोल्न सक्दैनन् र हच्किन्छन्। केही कुरा चित्त नबुझेर सोध्यो भने "तपाई डाक्टर कि म डाक्टर?"
"एउटै कुरा कत्ति सोधेको?", “तपाईंलाई मात्र यस्तो परेको हो र?” भन्ने जवाफ झर्केर आउँछ। थोरै बोल्ने, भेट्न गार्‍हो हुने, सधैं व्यस्त रहने व्यक्ति ठूलो हो भन्ने सोचाइले पनि काम गरेको हुनसक्छ। बरु नर्सहरुसँग बिरामी र उनका आफन्तहरु सहज मान्छन्। उनीहरुसँगै नजिक हुन्छन् पनि। मैले यहाँ व्यवसायिक निकटताको कुरा गरेको हुँ, जुन डाक्टर र उसको बिरामीबीच अलि कमै देखिन्छ।
लामा टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा एमडी जिपी रेजिडेन्ट छन्। उनलाई फेसबुकमा samir.lama.108 वा ट्विटरमा @mesam0620 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। उनी स्वस्थ नेपाल (Healthy Nepal) बारे http://myhealthynepal.blogspot.com/ मा ब्लग लेख्छन्।
सम्बन्धित यी आर्टिकलहरु पनि पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: 2013-11-08 12:55:46